SAFFRON PEOPLE'S MOVEMENT: ဆင်းရဲခြင်း လွတ်ကင်းအောင် လမ်းပြကြောင်ပါမည်
Wednesday, 25 February 2009 18:54 ရန်ကုန်သားတာတေ
ကြွက်စုတ်။ ။ (လေသံကိုနှိမ့်၍) ခုနောက်ပိုင်းတော့ လိုးရှင်းလူးတာတို့၊ မော်ဒယ်လျှောက်ပြတာတို့ ခိုးရိုက် ပြီး အင်တာနက်မှာ တင်နေပြီတဲ့ဗျ (ရှလွတ်)
ကြွက်စုတ်က ပြောရင်း သွားရည်များပင်ကျလိုက်သေးသည်။ နောက်မှာရောက်နေသည့် ဖိုးရှုပ်ကို မမြင်ဘဲ ရုပ်တည်နှင့် ရွှီးကောင်းတိုင်း ရွှီးနေသည့် ကြွက်စုတ်ကို ကြည့်ကာ ဖိုးရှုပ် ရယ်ချင်သွားသည်။ ရယ်သံ အနည်းငယ် ထွက်သွားသောကြောင့် သူတို့ ၂ ယောက် လှည့်ကြည့် လိုက်သည်။
ဖိုးရှုပ်။ ။ ဟေ့ကောင် .. ထင်ရာလျှောက်ပြောမနေနဲ့။ မင်းဟာလေ မှားချင်တိုင်းမှား သတင်းဌာနက သတင်း ထောက် ကျနေတာပဲ။ နားစွန်နားဖျားကြားတာနဲ့ ပြောမယ်၊ ရေးမယ် ဆိုတာချည်းပဲ။ မင်းပြောတဲ့ ဆင်းရဲသားကား ဆိုတာ အပြာကားကွ။ ခု မရိုက်ရတဲ့ ဆင်းရဲသားကား ဆိုတာ တကယ့်ကို ဆင်းရဲစုတ်ပြတ် နွမ်းပါးတဲ့ ဇာတ်လမ်း တွေကိုပြောတာ။
ထိုစဉ် ဝါဝီ ကော်ဖီဆိုင်၏ ထောင့်တနေရာမှ တဟားဟား အော်ရယ်လိုက်သော အသံနက်ကြီးတသံ ထွက်ပေါ် လာသဖြင့် သူတို့အားလုံး လန့်သွားကြသည်။ ကော်ဖီဆိုင်ထောင့်တွင် ထိုင်နေသူမှာ ပြန်ကြားရေး ဝန်ကြီး ဖြစ် နေသည်။
ဝန်ကြီး။ ။ ဟဲဟဲဟဲဟဲ။ ကျုပ်လည်း ခင်ဗျားတို့ ဘီအမ်အေကို လာလေ့လာတာပေါ့ဗျ။ ခင်ဗျားတို့ အတိုက် အခံ သတင်းသမားတွေ မဆိုးဘူးဘဲ။ အတော်သောက်နိုင်တယ်နော်။
ဖိုးရှုပ်။ ။ ဒါကတော့ သောက်နိုင်ဆို သက်တမ်းရင့်အသောက်သမားတွေကိုးဗျ။ သောက်သက်က တော်လှန် ရေးကာလနဲ့တူတူပဲလေ၊ အနှစ် ၂၀ ကျော်ပြီ။ ဒါနဲ့ ဝန်ကြီးနဲ့တွေ့တာနဲ့ အတော်ပဲ။ မေးရဦးမယ်။ ခု မြန်မာ့ ရုပ်ရှင်မှာ ဆင်းရဲသားဇာတ်လမ်း မရိုက်ရတော့ဘူးဆို (ဖိုးရှုပ်က ကိုယ်ခံရမည့်အကွက်ဖြစ်သောကြောင့် အမြန် ဆုံး စကားလွှဲလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်)
ရုက္ခစိုး။ ။ ဟောလိဝုဒ်မှာတော့ ဆင်းရဲသားကား Slumdog Millionaire က အော်စကာရသွားတယ်နော်။ တကယ်ဆို ကျုပ်တို့ဆီမှာလည်း ခွေးသန်းတို့၊ ကြောင်သန်း တို့ လူသန်းတို့ မျောက်သန်းတို့ …. (မီလျံ ဆို သော စကားကို ဦးရုက္ခစိုးက သန်း ဟုတိုက်ရိုက်မြန်မာမှု ပြုနေရာ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး နာမည်ပါနေသောကြောင့် ဗိုလ်ချုပ်ကြောင်ဆန်းက အမြန်စကားဖြတ်လိုက်သည်)
ဝန်ကြီးက ဖိုးရှုပ်ကို အထင်သေးသည့်အကြည့်ဖြင့် တချက်ကြည့်ပြီး အကယ်ဒမီကျော်ရဲအောင်စတိုင် ပြုံး လိုက်ရာ အပြုံးမတတ်သဖြင့် ဗေလုဝနှင့် ခပ်ဆင်ဆင် ဖြစ်သွားသည်။
ဝန်ကြီး။ ။ ခင်ဗျားတို့ ပြောပြောနေတဲ့ စိန်စီသော ည ဆိုတာ သူဌေး သရုပ်မှန်ပေါ့။ ဒီထက် သရုပ်မှန်တာ တောင် ဒီလောက်သရုပ်မမှန်ဘူး။ အဲဒါမျိုး ကားတွေ များများ ရိုက်ဖို့ ပြောနေတာကွ။
ဝန်ကြီး။ ။ ပေါတာပေါ့ဗျာ။ ဘယ်လောက်ပေါသလဲဆိုရင် ကမ္ဘာပေါ်မှာအပေါဆုံးလို့တောင် ပြောလို့ ရတယ်။ နေဦးဗျ ဆက်ပြောဦးမယ်။ (တက်တက်ကြွကြွ အားကျိုးမာန်တက်နှင့် အလွန်ပြောချင်နေပုံရသော ဝန်ကြီး ပါးစပ်မှ တံတွေးစဉ်သွားသဖြင့် ဦးရုက္ခစိုး အမြန်ရှောင်လိုက်ရသည်) စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်ကြီး ကိုတေဆေးရဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန် ဇာတ်လမ်းကို သူဌေးဖြစ်နည်း ဖြတ်လမ်း ဆိုပြီး အကယ်ဒမီ မိုးဒီကြီးနဲ့ ရိုက်လိုက်ရင် ပညာပေး ကော၊ ဟာသကော၊ ဘဝသရုပ်ဖော်ကောပါနေလို့ မရိုက်ခင်ကတောင် အကယ်ဒမီကြိုပေးလို့ရတယ်။ ဟား ပြောရင်းနဲ့မှ သတိရတယ်။ ဒီကားကို ဒါရိုက်တာ ပင်ဂွင်းမှောင်မှောင်ကို ရိုက်ခိုင်းဦးမှ။
ရုက္ခစိုး။ ။ ဒါနဲ့ ဝန်ကြီး .. ဟိုးတလောက မင်းသမီးတွေကို ဦးစားပေးတဲ့ဇာတ် မရိုက်ရဘူးကြားတယ်။ အဲဒါ ကော ဘယ်လိုဖြစ်သွားပြီလဲ။
ဝန်ကြီးက သူပြောလို့မှ မဝခင် အတင်းဖြတ်မေးသည့် ဦးရုက္ခစိုးကို သိပ်မကျေနပ်သော်လည်း မေးခွန်း အား လုံးက သူ့ကိုဦးတည် မေးနေခြင်း ဖြစ်သောကြောင့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ခပ်တည်တည်ရွှီးသည့် စတိုင် ဖြင့် ပြန် ဖြေသည်။
“ဝန်ကြီးတော့ …. သွားရှာပြီထင်တယ်” ဟု ဖိုးရှုပ်တွေးရင် ခပ်လန့်လန့် အထစ်ထစ် အငေါ့ငေါ့နှင့် ဆက်မေး လိုက်သည်။
ဝန်ကြီး။ ။ ဒါကတော့ မိန်းမတွေ ရှေ့မထွက်စေချင်တဲ့သဘော၊ ဆင်းရဲသားဆိုတာ အပြင်မှာပဲရှိရမယ်၊ ရုပ်ရှင်ထဲမှာ မရှိစေရဘူးဆိုတဲ့ သဘောပေါ့။ မိုးကုတ်က ပတ္တမြားတွေ၊ ဖားကန့်ကကျောက်စိမ်းတွေ၊ မရောင်း ရတော့တဲ့တူတူ ရုပ်ရှင်ထဲမှာ ထည့်ရိုက်ခိုင်းမယ်၊ ထမင်းပန်းကန်မှာ စိန်တွေစီရမယ်။ ကျုပ်တို့ နိုင်ငံသားတွေ အားလုံး ဘယ်လိုပင်ဆင်းရဲ မွဲပြာကျနေသော်ငြားလည်း ရုပ်ရှင်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာ ငါဟာ လူချမ်းသာ တယောက်ပါလား ဆိုပြီး ထင်ယောင်ထင်မှား ဖြစ်စေရမယ်။ တောက် တယ်တော်တဲ့ ငါပါလား။
အံကြိတ်ကာ ပြောနေရင်း ဝန်ကြီးက အားမရတော့၍ထင်သည် လက်သီးလက်မောင်းအားရပါးရ တန်းလိုက် ရာ ကြွက်စုတ် မျက်နှာကို သီသီလေး ကပ်လွဲသွားရသည်။
ဝန်ကြီး။ ။ ဆင်းရဲခြင်း လွတ်ကင်းအောင် လမ်းပြကြောင်ပါမည် .. ရတနာ ခုနစ်သွယ် တကယ်ပင် စုံညီ ကား တိုင်းပါရမည် … တယ်နယ်ဗျောင် .. တူနယ် တူနယ် ဗျောင် .. တူနယ်ဗျောင် … ။ ။